Madaxweyne Trump oo Hoggaamiyaha Waqooyiga Kuuriya ku tilmaamay nin xariif ah | Xaqiiqonews
Madaxweyne Trump oo Hoggaamiyaha Waqooyiga Kuuriya ku tilmaamay nin xariif ah
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay Hoggaamiyaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un, nin aad xariif u ah.
Donald Trump oo la hadlayay Barmaamij ka baxa Telefishinka CBS ayaa sheegay in Kim Jong-un uu awooda qabsaday, isagoo aad u dhalinyar ah, uuna la macaamilay dad u aad u qalafsan.
Waxaa uu sheegay inuu ogsoon yahay in Kim Jong-un uu yahay nin maskax ahaan caafimaad qabo.
“Dadku waxay leeyihiin, miyuu fiyow yahay? Ma garanayo…laakin wuxuu ahaa nin dhallinyar oo jiray 26 ama 27 markii uu aabihii dhintay. Wuxuu la macaamilayaa dad sida muuqata aad u qallafsan, gaar ahaan jeneraallada”ayuu yiri Donald Trump.
Xiisada Mareykanka iyo Waqooyiga Kuuriya ayaa todobaadyadii u dambeysay sii xoogeysatay, kaddib markii labada dal ay hawada isu mariyeen hanjabaado, waxaana Waqooyiga Kuuriya ay sii wadaa tijaabinta gantaalada nooca balastikada ah.